၅ ပေ ကျော်လွန်ဆောက်လုပ်ဟုဆိုကာ .. ( Moved to Member ONLY category – By Admin) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ၅ ပေ ကျော်လွန်ဆောက်လုပ်ဟုဆိုကာ .. ( Moved to Member ONLY category – By Admin)
၅ ပေ ကျော်လွန်ဆောက်လုပ်ဟုဆိုကာ .. ( Moved to Member ONLY category – By Admin)
- Aung Min
Posted by Aung Min on Feb 19, 2013 in Copy/Paste, Members |7comments
၅ ပေ ကျော်လွန်ဆောက်လုပ်ဟုဆိုကာ အစ္စလာမ် ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်းကို အမြစ်ဖြတ် ဖျက်ဆီး
သတင်း အထူးသတင်း မြန်မာမွတ်စလင်မ်သတင်း — ၁၈ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၁၃
သာကေတ မာန်ပြေ ၃ ရပ်ကွက် ၁၉လမ်းနှင့် ၁၉ လမ်းထောင့်ရှိ မြန်မာမွတ်စလင်မ် ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်းအား အစွန်းရောက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက ယနေ့နံနက်ပိုင်းမှ စတင်ကာ အဓမ္မ ဖျက်ဆီးရန်စုဝေး အုံကြွခဲ့ကြပြီး နေ့လယ် ၁၂း၁ဝ နာရီဝန်းကျင်တွင် စည်ပင် ခွင့်ပြုချက်ထက် ကျော်လွန်ဆောက်လုပ်သည်ဟုဆိုကာ တိုင်ပါမကျန် ဖြိုချလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သူများက myanmarmuslim.net သို့ပြောသည်
အထက်ပါအတိုင်း ဖျက်ဆီးရန်အုံကြွစုဝေးနေစဉ်အတွင်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဟု အထင်ခံရသူများကို မှတ်တမ်းများရယူနိုင်ခြင်း မရှိစေရန် ရပ်ကွက်နေ အစွန်းရောက်များက ဟန့်တားမှုများရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သတင်းထောက်တစ်ယောက်ကို ကုလားနဲ့တူတယ် ဆိုပြီး စာသင်ဆောင်အတွင်းမှာ ခေါ်စစ်တယ်။ အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာကောင်စီဌာနချုပ် အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်မောင်သန်းကိုတော့ ထိုးကြိတ်တာလုပ်တယ်၊
ဟု အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကို မျက်မြင် မြင်တွေ့ခဲ့သည့် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
အထက်ပါ မြန်မာမွတ်စလင်မ် ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်းသည် ၁၉၅၈ ခုနှစ်ကတည်းက ဘာသာရေးစာသင်ကျောင်း အဖြစ် ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိထားသည့် နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါ စာသင်ကျောင်းအတွက် ခွင့်ပြုမိန့်ကို ရပ်ကွက်၊ မြို့နယ်၊ ခရိုင်၊ တိုင်း သာသနာရေးဦးစီးမှူး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အထိ ၅ လကြာ အဆင့်ဆင့်တင်ပြခဲ့ပြီး လွန်ခဲ့သည့် ၂ ပတ်ခန့်က ပြင်ဆင်ခွင့်အမိန့်ရရှိခဲ့ပါသည်။
ယနေ့တွင် အထက်ပါ အုံကြွမှုကြောင့် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အင်ဂျင်နီယာ ဌာနမှ လက်ထောက်ဌာနမှုး ငွေစိုးသောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်စာတွင် ဘောင်ကျော်အောင် ဆောက်လုပ်ထားသည့် အစိတ်အပိုင်းများအား ၁၇-၂-၂၀၁၃ နေ့တွင် ချက်ချင်းပြန်လည် ဖျက်သိမ်းပေးပါရန် အကြောင်းကြားစာတစ်ရပ်ကို ရုံးပိတ်ရက်တွင် နာရီပိုင်းအတွင်း ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့သည်။
ထိုသို့ဘောင်ကျော်အောင် ဆောက်လုပ်ထားသည်ဟုဆိုသော ငါးပေခန့်အမြင့်အစိတ်အပိုင်းကို သာ ဖျက်သိမ်းရန် စာတွင် ညွှန်ကြားခဲ့သော်လည်း မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဗိုလ်ကြီး စန်းမင်း၊ မြို့နယ်ရဲမှူးကျော်ဝင်း၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကံထွန်းတို့ကြီးကြပ်သည့် ဖျက်သိမ်းရေးအဖွဲ့က ညွှန်ကြားချက်ထက် ကျော်လွန်ကာ တိုင်ပါမကျန် ဖျက်ဆီးဖြိုချခဲ့သည်။ ယခုကဲ့သို့ လူထုအုံကြွမှုဖြင့် အစ္စလာမ်ဘာသာရေး အဆောက်အဦးတစ်ခုအား ဖျက်ဆီးရန်အတွက် မာန်ပြေ ၁၉ လမ်း ဆယ်အိမ်မှူးများဖြစ်သည့် ကိုစိုးလွင်နှင့် ဦးစောဦးအပါအဝင် တင်ထွန်းနိုင်၊ သိန်းထိုက်အောင်၊ အေးနိုင်တို့က ဦးဆောင်ခဲ့ကြောင်း လည်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဥပဒေ မစိုးမိုးဘူး ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘူး၊ လူနည်းစုဘာသာဝင်တွေအပေါ်မှာ မတရားခွဲခြား ဆက်ဆံ တယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော် ရဲရဲတင်းတင်း ပြောတယ်။ အဲဒါတွေဖြစ်လာအောင်လုပ်ဖို့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှာကော၊ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရမှာပါ အဆင့်ဆင့် တာဝန်ရှိတယ်
ဟု အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာ ကောင်စီဌာနချုပ်အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးတင်မောင်သန်းက အထက်ပါဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်း၏သဘောထားအမြင်ကို myanmarmuslim.netသို့ပြောသည်။
“လူနည်းစု ဘာသာဝင်တွေကို ကာကွယ်တဲ့ဥပဒေဟာ ယဉ်ကျေးတဲ့ နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတယ်။”ဟု အထက်ပါဖြစ်ရပ်ကို သွားရောက်လေ့လာ ရာမှ ထိုးကြိတ်ခံရကာ ဖုန်းလုယူခြင်းခံရသည့် ဦးတင်မောင်သန်းက ပြောသည်။ ဦးတင်မောင်သန်း ကိုင်ဆောင်သွားသည့် လက်ကိုင်ဖုန်း (၀၉-၅၀၁၃၁၅၉) ကို အကြမ်းဖက် ထိုးကြိတ်သူများက လုယက်ထားလိုက်ကြောင်းလည်းသိရသည်။
ရုံးကလေးဗလီမှာ သွပ်လေးငါးချပ်မိုးဖို့ ခွင့်ပြုမိန့်က ၂ နှစ်ကြာတယ်။ အခုလို ဖျက်ဖို့ အမိန့်ကျတော့ တနင်္ဂနွေနေ့လိုမှာတောင် နာရီပိုင်းပဲ ကြာတယ်
ဟု မြန်မာမွတ်စလင်မ်များ ခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဦးတင်မောင်သန်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ဖြိုချခံလိုက်ရသည့် အစ္စလာမ်ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်းကိစ္စရပ်အား မြန်မာ့မီဒီယာများတွင် ဗလီဟု မှားယွင်းဖော်ပြကာ သတင်းမှန်ကို ထိန်ချန်ခဲ့ကြသည်။
The Voice ရဲ့ Facebook မှာ ဗလီဆောက်လို့ ပဋိပက္ခဖြစ်တယ်လို့ရေးတယ်။ တစ်ဖက်အသံကိုပဲ နားထောင်လို့ ဒီလိုဖြစ်တာ။ အခုတော့ ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပြီ
ဟု အွန်လိုင်းသုံးစွဲသူ လူငယ်တစ်ဦးက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိ အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အခန်း(၈)နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသားများ၏ မူလ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များ အပိုဒ် ၃၆၃တွင် “နိုင်ငံတော်သည် အသိအမှတ်ပြုထားသော ဘာသာ သာသနာများကို တတ်နိုင်သမျှ ကူညီ စောင့်ရှောက်မည်″ ဟုလည်းကောင်း အပိုဒ် ၃၆၄ တွင် “…လူမျိုးရေးကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဘာသာရေးကြောင့်သော် လည်း ကောင်း၊ တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက်၊ တစ်ဂိုဏ်းနှင့် တစ်ဂိုဏ်း မုန်းတီးခြင်း၊ ရန်မူခြင်း၊ စိတ်ဝမ်းကွဲခြင်း တစ်မျိုးမျိုးပေါ်ပေါက်လာစေရန် ရည်ရွယ်သော သို့မဟုတ် ပေါ်ပေါက်လာရန် အကြောင်းရှိသော အပြုအမူသည် ဤ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်သည်။ ထိုအပြုအမူမျိုးအတွက် ပြစ်ဒဏ်ပေးနိုင်ရန် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းနိုင်သည်″ ဟု ဖော်ပြ ပါရှိသည်။
About Aung Min
Aung Min has written 1 post in this Website..
View all posts by Aung Min →
မလှိမ့်တစ်ပတ်နဲ့ ပေါက်ကရတွေလာမဖွနဲ့။ မင်းအကျင့်အတိုင်းအဲဒိအဆောက်အဦးကို မလှိမ့်တစ်ပတ်လုပ်ပြီး ဆောက်ထားတဲ့အထောက်အထားတွေရှိကြောင်းကို ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ခဲ့ပြီးတင်ထားတဲ့သတင်းတွေရှိတယ်။ ဘယ်ဘက်မှဘက်မလိုက်ပဲ အရှိကိုအရှိအတိုင်း တွေ့တာကိုတွေ့တဲ့အတိုင်း ပြန်တင်ပြထားတဲ့သတင်း ဒီမှာသွားဖတ်ကြည့်
ထပ်ပြောမယ်နော်။ မလှိမ့်တစ်ပတ်နဲ့ ပေါက်ကရတွေလာမဖွနဲ့။
အီရန်နိုင်ငံ တီဟီရန်မြို့ ဆိုင်တင်ရောင်းချထားတဲ့ အိမ်အလှဆင် ဗုဒ္ဓရုပ်တုများကို အီရန်အာဏာပိုင်များက သိမ်းဆည်းတားမြစ်တဲ့သတင်းပါ။ ဝယ်သူအများစု မွတ်စလင်များက အိမ်နဲ့ကား တန်ဆာဆင်ဖို့ ဆိုပေမဲ့ ဘာသာရေးအစွန်းရောက် အာဏာပိုင်များက ဗုဒ္ဓဘာသာ ပြန့်ပွားဖို့လုပ်တယ် ယူဆပြီး သိမ်းဆည်းပစ်ပါတယ်။ အခြား ဘာဘီဒိုးလ် အရုပ်နဲ့ ဆင်ပ်စင်တီဗွီ ကာတွန်းရုပ်များကိုလည်း ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ မကိုက်ညီဆိုကာ တားမြစ်ထားပါတယ်။
Iran confiscates Buddha statues from Tehran shops
AP 1 day ago By Nasser Karimi
Statues of Buddha are popular decorations in homes in Tehran, Iran’s capital, but authorities are confiscating them from shops to stop the promotion of Buddhism in the Muslim country.
TEHRAN, Iran — Buddha statues have joined Barbie dolls and characters from “The Simpsons” TV cartoon as banned items in this conservative Muslim nation.
The newspaper quoted Saeed Jaberi Ansari, an official for the protection of Iran’s cultural heritage, as calling the Buddha statues symbols of “cultural invasion.” He said authorities will not permitaspecific belief to be promoted through such items. Ansari did not say how many Buddhas had been seized, but that the “cleansing” would continue.
Some Iranians buy Buddha’s statues to decorate their homes and cars. Most are made in China and come from Iranian free-trade zones in the Persian Gulf.
“As I understand, none of our customers cared about Buddhism, they only bought it for decoration,” said Reza Sanaei,ashopkeeper who sells the statues.
A customer, Marjan Arbabi, said she personally did not like the statues. “But my parents haveaset of five Buddha’s statues at their home simply because they think the statues are beautiful,” she said.
In 2010, several statues depicting prominent Iranians disappeared from Tehran city’s streets and squares. Their disappearance was blamed on an unnamed group withastrict interpretation of Islam that bans the depiction of the human form in art.
ငဖွပါကွာ၊ အမှန်ဘယ်လို ဆိုတာ နက်ပေါ်ကလူတိုင်း သိရဲ့သားနဲ့ ဆူအောင်လုပ်နေသလား မွတ်စ်က အာဏာရှင် စနစ်ကြိုက်လို့လား၊ ဒါမှသူတို့ အနေချောင်မယ်ထင် တာလား၊
အဲ့ဒီ စာသင်ကျောင်းဆောက်မှာဆိုပြီး လိမ်ညာပြီး ဆောက်နေတဲ့ ဗလီ ကို သာကတေ သားတွေ ဖျက်ဆီး လိုက်တယ် ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရမ်းကို ဝမ်းသာပီတိ ဖြစ်ရပါတယ်
နောက်လဲ ဒီလို ခွေးသူခိုးကျင့် ကျင့်ပြီး ကြံမယ်ဆိုရင် ၊ မြန်မာနိုင်ငံသား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းမှာ (မြန်မာနိုင်ငံ သည် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သော နိုင်ငံအဖြစ် ကြေငြာပြီး ဖြစ်သည်) တားဆီးဖို့၊ တားမရရင် ဖျက်ဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်
တစ်ကမ္ဘာလုံးလဲ သိပြီး ဖြစ်ပါပြီ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကိုယ်မေကိုယ်လိုးတာ ၊ ကိုယ့်သားသမီး ကိုယ်ပြန်လိုးတာ ဘယ်ဘာသာပဲ ရှိသလဲ ဆိုတာ
အင်း သတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ ဖတ်သွားတယ်ဗျာ။
ဘာသာရေးစာသင်ကျောင်း ဆိုပေမယ့် တစ်နေ့ သုံးခါ ဝတ်ပြုရတာ
ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ဆန်ဆန် တိုးချဲ့ဆောက်နေတာတွေကြောင့် ရပ်ကွက်နဲ့ ပြဿနာဖြစ်ကြတာလို့ဆိုပါတယ် ၊